आज चैत २४ गते मंगलबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल:: Mero Desh
Published on: २४ चैत्र २०७७, मंगलवार ०२:२१
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ)स्वास्थ्य कमजोर रहनाले पढाइ लेखाइमा समय दिन नसकिएला । धेरै समय सानातिना घरेलु काममै अल्झनुपर्ला । सवारीमा सावधानी अपनाउनु होला । ठूलो प्रयत्न गर्दा पनि उपलब्धि उठाउन मुस्किल पर्नेछ । बोलीको भरमा काम सम्पादन हुन सक्छ ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) लाभ हुने कामका सन्दर्भ मा केही प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना छ । अरूको भरपर्दा आँटेको काम सम्पादन नहुन सक्छ । रमाइलो जमघटका बीच स्वादिष्ट भोजनको आनन्द पाइएला पहिलेको सफल ताले थप हौसला जगाउनेछ रुचिका विषयमा लगानी बढा उने समय छ ।
मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ, के, को, हा) नयाँ काममा हात हाल्ने समय छ । सोखले खर्च बढाउन सक्छ । प्रयत्न गर्दा सजिलै फाइदा लिन सकिनेछ । यात्रामा वि’शेष लाभ होला । लाभ हुने काम प्रारम्भ गर्ने समय छ । गरिएका कामको राम्रै मूल्यांकन हुनेछ । भौतिक साधन समेत जुट्नेछ ।
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु, डे, डो) अवसरलाई पछ्याउन नसक्दा पछि परिनेछ अस्वस्थताले काममा बाधा पु’र्याउला । बाध्यताले अलमल्याउन सक्छ । कृषिमा कामको चाप र चौपायामा केहि समस्या देखिनेछ । तर मेहनत गर्दा प्रशस्त धन आर्जन हुने समय छ । आँटेका काम तत्काल सम्पादन हुनेछन् ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो, टा,टी,टू, टे) दम्पतीबीच विवाद वा पारिवारिक असमझदारी बढ्ने सम्भावना छ! सामान्य चुनौ ती देखिए पनि मेहनत गर्दा लाभ मिल्नेछ । दिगो योजना प्रारम्भ हुन सक्छ । साझेदारीमा फाइदा हुनेछ । आम्दानी तथा आयआर्जनका स्रोत समेत समय छ । मेहनत अनुसार फाइदा कमै होला ।
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो) शत्रु र रोगबाट छुटकारा मिल्ने समय छ । मुद्दा मामिलामा पनि विजयी भइनेछ । व्यापार तथा उद्योगतर्फ सामान्य फाइदाको योग छ । समय मा होस नपुग्नाले काम रोकिन सक्छ अवसरको खोजी मा केही दौडधुप गर्नुपर्ला । व्यापारमा मनग्य फाइदा हुनेछ ।
तुला (रा,री,रु,रे, रो, ता, ती, तू, ते) टाढिएका सन्तानलाई आमाको यादले सताउन सक्छ !शुभचिन्तकहरूको सुझाव मनन गर्दा फाइदा हुनेछ । नयाँ कामको प्र’स्ताव आउनेछ भने सहयोगीहरू प्र’शस्तै भेटिनेछन् । मनग्य धन आर्जन हुनेछ परिवारजनबाट टाढिनुपर्ला अरूले फसाउन सक्छन्
बृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) नयाँ योजना का’र्यान्व यनमा ल्याउन मुस्किल पर्ला । आफूलाई कमजोर भएको अनुभूति हुनेछ । रोकिएका काम बन्ने र नयाँ काम सुरु गर्ने समय छ । उद्योग र व्यापारमा वि’शेष फाइदा हुनेछ । आफ्नै कमजोरीले विवादमा परिनेछ । उपचारमा खर्च हुने योग छ ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध, फा, ढा, भे) हुलमुलमा धन माल हराउन सक्छ । साथीभाइको सहयोग जुटाउन प्रयत्न गर्नु होला ! मनोरञ्जनमा अलमलिनाले लक्ष्य प्राप्त गर्न विलम्ब हुनेछ । प्रयत्न गर्दा विभिन्न अवसर प्राप्त हुनुका साथै दैनि कीमा परिवर्तन आउनेछ अनावश्यक भ्रमणमा समय बित्न सक्छ ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) चिता एको काममा बाधा हुँदा मन खिन्न हुनेछ !पहिलेका समस्या दोहोरिन सक्छन् !लेनदेनको विवादले अप्ठ्यारो पर्न सक्छ आर्थिक क्रियाकलापमा राम्रै फाइदा उठ्न सक्छ । बौद्धिक क्षेत्रमा राम्रो उपलब्धि प्राप्त हुनेछ !प्रयत्न गर्दागर्दै सफलता हात लाग्ला ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा)कर्मको उचित प्र’तिफल पाइनेछ विभिन्न उपहार प्राप्त हुने समय छ !सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिनेछन् !गरेका कामबाट धेरैलाई फाइदा पुग्नेछ व्यक्तित्व निखार्दै नयाँ काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ, दे, दो, चा, ची) आलस्य गर्ने बानीले समस्या निम्त्याए पनि मेहनतीहरूका लागि समय उत्साह जनक रहनेछ । बिछोडिएका परिवारजनसँग भेटघाट हुनेछ पहिलेका कमजोरी सुधार्दै फाइदा उठाउने समय छ अस्व स्थताले काममा ढिलासुस्ती हुन सक्छ ।